भक्तपुर नगरपालिकामा जनताको सहयाेगबाट सात सय अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादन « AayoMail
आईतबार, ३ असोज २०७८
भक्तपुर नगरपालिकामा जनताको सहयाेगबाट सात सय अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादन
2021,27 August, 8:57 am
देशको अवस्थाबाट म आफैं खुसी छैन, जनता कसरी…
सारा कुरा अहिले सम्झिन्छु–विद्यार्थी जीवनबाट लोकतन्त्रका लागि जुन योगदान गरेको
सबै दल मिलेर सरकारी जग्गा सखाप पार्ने भए!
सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि
सेना ल्याउँछौं त अमेरिकाले कहाँ भन्छ र!
एमसिसी सम्झौतासँग डलर र विकास मात्र पूर्वाधार र समृद्धिमात्र होइन,
डा. ज्ञानेन्द्र गिरी प्राध्यापक नभएको ठहर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो– कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मीलाई अधिकांस माग पुरा भएको भन्दै सरकारले सेवा सुचारू गर्न अनुरोध गरेको छ।आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानमा देखिएका विवाद समाधानका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकका अधिकांश माग सम्बोधन भइसकेको जनाएको छ।
भक्तपुर -भक्तपुरको अक्सिजन प्लान्टबाट दुई महिनामा ६ सय ९५ वटा अक्सिजन उत्पादन गरिएका छन्। जसमा ३ सय १३ वटा ठूलो सिलिन्डर छन् भने बाकी ३ सय ८२ सानो सिलिन्डर रहेको जनाएको छ।
भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाअध्यक्ष रविन्द्र ज्याख्वले नगरभित्रका वडाबासीहरुको लागि निःशुल्क अक्सिजन वितरण गर्दै आएको जानकारी गराए। निशुल्क अक्सिजन पाउनको लागि वडाको सिफारिस चाहिने वडाअध्यक्ष ज्याख्वले सुनाए। उनले एउटा सिफारिस पत्रबाट १० वटासम्म अक्सिजन सिलिन्डर लान सकिने बताए। त्यस्तै नगरबाहिरका लागि भने सःशुुल्क अक्सिजन वितरण गरिएको उनी सुनाउँछन्।
ख्वप अस्पतालका कर्मचारी लक्ष्मी सुन्दर पछींले एउटा सिलिन्डर भरेको वापत १०–२० लिटरको भए ५० रुपैया र ४७ लिटरको भए १ सय ५० रुपैया लिने गरेको जानकारी गराए। उनले ठूलो अक्सिजन सिलिण्डरको लागि १० हजार धरौटी र सानो सिलिण्डरको लागि ५ हजार धरौटी लिने गरेको सुनाए।
अहिलेसम्म दुई महिनामा १ सय ७९ सिलिण्डर नगरबाहिर गएको छ, उनले भने। बाँकि ५ सय १६ वटा नगरबासीहरुको लागि नै प्रयोग भएको उनको बुझाई छ। अहिले दिनको ३ घन्टा मात्र अक्सिजन प्लान्ट संचालन गर्ने गरेको उनले बताए। यदि अर्जेन्ट परेको खण्डमा जतिबेला पनि अक्सिजन उपलब्ध गराइको उनी बताउँछन्। अहिले दैनिक १५ वटासम्म अक्सिजन लिन आउने गरेको उनले सुनाए।
असार १ गतेदेखि अक्सिजन प्लान्ट सुर गरिएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न एक करोड २० लाखको लागतको अक्सिजन मेसिन जडान गरेको थियो। यसले २४ घण्टामा १ सय २० वटा सम्म अक्सिजन उत्पादन गर्ने क्षमता भएको मेसिन हो।
नगरबासीहरुको सहयोगबाट अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको थियो। यो सबै रकम भक्तपुर नगरपालिकाले नगरबासीसंँग सहयोग माग गरी जुटाएकोले नगरबासीहरुका लागि निःशुल्क गरिएको हो। कोरोनाको दोस्रो लहरमा अक्सिजनको कमी देखीएकाले सहयोग रकम जुटाएर नगरपालिकामा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशका साढे ५२ करोडका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज
लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका साढे ५२ करोड रुपैयाँ बढी लगानीका २१९ वटा सडक आयोजना खारेज भएका छन्। केपी
‘हनिट्रयाप’ मा पारेर महिलाले ५० लाख मागेपछि…
घोराही उपमहानगरपालिका–१५ का एक जनालाई असार ६ गते घोराही बजारमा रहेको कोहिनुर रेष्टुरेन्टमा बोलाएर बियर, मासु खाएपछि साँझ घर जान
संविधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ: शरतसिंह भण्डारी
लोसपा बागमती प्रदेश समितिले आइतबार सहिदको बलिदानी एवं संविधानको पूर्णता विषयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले संविधानले पूर्णता पाए पनि
ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु
भक्तपुरको बालकोटमा आइतबार ट्याक्टर दुर्घटना हुँंदा चालककाे घटनास्थलमै मृत्यु भएकाे छ। अत्याधिक भारका कारण उकालोमा अगाडिको ईन्जिन उठेपछि च्यापियर लु